Warshadda Qamadiga Beerta Shiinaha iyo alaableyda | RY AGRI
Beerleyda hadhuudhku waxay beerataa sarreen. Waxaad kala dooran kartaa 9 ilaa 24 saf. Badeecaddu waxay ka kooban tahay jir, sanduuqa bacriminta abuurka, mitir abuur, tuubbo ka soo baxeysa bacriminta, fur taranka iyo gawaarida wax lagu shiido. Qoditaanka, bacriminta, abuurka iyo howlaha isku dheelitirka ayaa lagu dhammayn karaa hal mar.
Mashiinka waa fududahay in la hagaajiyo, adag yahay, waxaana loo isticmaali karaa in lagu beero miraha sababo kala duwan.
Adoo hagaajinaya caarada jeexjeexa ama saxanka, miraha ayaa isku qoto dheer si loo hubiyo inuu biqil isku mar noqdo. Qalabka waxaa lagu soo saari karaa bacrimin ama la'aan.
Qoto dheer bacriminta
Cagaf isku mid ah
Saddex geesood ah ayaa la saaray
Abuur dalagyo isla markaana bacrimiya
· Sanduuqa bacriminta iyo sanduuqa abuurku waxay ka samaysan yihiin bir bir ah, oo aan qudhumin ama miridh ka jabin doonin.
· Waxqabadka shaabadaynta ee sidashadu waa mid aad u wanaagsan, mana sahlana in siigada la galo
· Markaad wax beerayso, si toos ah ayaa loogu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo dhererka dhulka.
· Waxay dhameystiri kartaa howlaha sida isku dheellitirka, qoditaanka, bacriminta, beero, isku ururinta, daboolida carrada iyo godad qodista.
· Fududeeye laba-fure khafiif ah, kaas oo si habsami leh u qodmi ​​kara, u bacrimin kara kuna beeran kara carrada meesha cawska dib loogu celinayo berrinka.
· Qalabka xoqidda ayaa ka dhigi kara mashiinka inuu si habsami leh ugu shaqeeyo dhoobada.
Qaabka baakadaha ee mashiinka guud ahaan waa bir bir ah, habka gaadiidka waxaa loo go'aamiyaa iyadoo loo eegayo tirada badeecada, badanaa bad ahaan, maxaa yeelay cabirka beeraleyda hadhuudhku wuu badan yahay, haddii aad leedahay wakiilkan, waxaan sidoo kale bixin karnaa mashiinka wakiilkaaga Shiinaha.
Hore: Corn Cornter
Xiga: Garlic Beeraha